မြေခဲပေါ်စဂ်ျသာပြုခြင်း နှင့် ပတ်သတ် ပြီး အကျယ် တဝန်း သိချင်ပါတယ်?အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
မြေခဲပေါ်စဂ်ျသာပြုခြင်း နှင့် ပတ်သတ် ပြီး အကျယ် တဝန်း သိချင်ပါတယ်?
ဒီဇငျဘာ ၉, ၂၀၁၇ - ၈:၁၄ ညနေ News Code : 871752 Source : ABNA Link:
မြေခဲပေါ်စဂ်ျသာပြုခြင်း နှင့် ပတ်သတ် ပြီး အနည်းငယ်ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း သိစေရန် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ် မိုရှီးရာဇီး ၏ (( شیعه پاسخ می گوید )) ကျမ်း မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အစ္စလာမ်အမြင်အရအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်အတွက်စဂ်ျသာပြုလုပ် ခြင်းသည်အရေးအကြီးဆုံးအေဗာဒသ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊အရေးကြီးဆုံးအေဗာ ဒသ်များမှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။သာဓကအားဖြင့်ရီဝါယသ်တော်များ၌လူသားသည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့်အနီးကပ်ဆုံးအချိန်သည်စဂ်ျသာပြုလုပ်နေသည့်အချိန်ဖြစ်သည်ဟုပါရှိပေသည်။သာသနာ့အကြီးအကဲများအထူးသ ဖြင့်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)နှင့်အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)တို့သည်စဂ်ျသာကြာမြင့်စွာပြုခဲ့ပေသည်။
အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်အတွက်စဂ်ျသာကိုကြာမြင့်စွာပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်လူသား၏ဝိညဉ်နှင့်အသက်ကိုမွန်မြတ်စေပါသည်။စဂ်ျသာသည် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ထံတော်ဝယ်အောက်ကျို့ခြင်း၊ကျေးကျွန်ဖြစ် ကြောင်းဝန်ခံခြင်း၏လက္ခဏာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍န မာဇ်၏ရကအတ်တိုင်း၌၂ကြိမ်စဂ်ျသာပြုရန်အမိန့်ပါရှိပေသည်။
စဂ်ျသာယေရှိုကိုရ်၊ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏မိုစ်သာအပ်ဝါဂျစ် စဂ်ျသာများ၊ဖန်ဆင်းရှင်အားစဂ်ျသာပြုမှုအတွက်ထင်ရှားသောသရုပ်ပြမှု များမှဖြစ်ပေသည်။လူသားအနေဖြင့်စဂ်ျသာပြုနေချိန်၌အလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်မှအပအခြားအရာများကိုမေ့သွားပေမည်။မိမိကိုယ်တိုင်ကအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့်အနီးကပ်ဆုံးသူအဖြစ်မြင်တွေ့ရပေမည်။ထို့အတွက်ကြောင့် အလ္လာဟ်နှင့်ပိုမို၍နီးကပ်မှုကိုဖြစ်စေပါသည်။ سير و سلوكနှင့် عرفان
ခြုံ၍ပြောရလျှင်အထက်ကဖေါ်ပြထားသည့်အတိုင်းကျော်ကြား သောဟဒီးစ်၏အထောက်အထားအရလူသားအနေဖြင့်ရှိုင်တွာန်အားစိတ် ဒုက္ခဖြစ်အောင်စဂ်ျသာထက်ပို၍ကောင်းသောလက်နက်မရှိချေ၊
الْقَهّار اللهُ مَعِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأطِلِ السُّجُودَ بَيْنَ يَدَىِ اللهِ الوَاحِدِ وَ إِذَا أرَدْتَ أنْ يَحْشُرَكَ
وَللهِِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّماوَاتِ وَالاَْرْضِ
အာယတ်တော်၏အသုံးအနှုန်းအရအလ္လာဟ်ဆိုသည့်စကားလုံး သည်ဝါကျအစ၌သုံးထားသည်။ဤအတွက်ကြောင့်သီးသန့်အထူးဟုအ ဓိပ္ပါယ်ရ၏။ဆိုလိုသည်မှာမိုးကောင်းကင်နှင့်မြေပြင်အတွင်းရှိအရာများအား လုံးသည်သီးသန့်အထူးအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ကိုသာလျှင်စဂ်ျသာပြုလုပ်ပါသည်။ထိုနည်းတူစွာစူရမ်အဲရ်ဖ်အာယတ်တော်အမှတ်၂၀၆( لَهُ يَسْجُدُون )ဟု ထပ်မံပြီးစဂ်ျသာသည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်တွက်သာလျှင်ဖြစ်ကြောင်းပြဆိုနေပါသည်။
အဓိကအားဖြင့်ကြည့်မည်ဆိုလျှင်စဂ်ျသာသည်ကျိုးနွံ၊နှိမ့်ချမှု၏ နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပေသည်။စဂ်ျသာသည်သီးသန့်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်တွက်သာလျှင်ဖြစ်ပေသည်။
အကယ်၍ကျွန်ုတို့အနေဖြင့်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်မှအပအခြားသူတစ်ဦး၊တစ်ယောက်(သို့)အရာဝတ္တုတစ်ခုကိုစဂ်ျသာပြုလုပ်မည်ဆိုလျှင် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်နှင့်ယှဉ်တွဲပေးခြင်းဖြစ်ပေမည်။ဤလုပ်ရပ်သည်မ မှန်ကန်ချေ။
စဂ်ျသာသည်ခဝပ်ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်၏။ထို့အတွက်ကြောင့်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်မှအပအခြားသူ(သို့)အရာဝတ္တုများကိုစဂ်ျ သာလုပ်ခွင့်မရှိချေ။သို့သော်လည်းကောင်းကင်တမန်များကဟဇရတ်သ် အာဒမ်(အ.စ)အားစဂ်ျသာပြုခဲ့ကြောင်းကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၌အာ ယတ်တော်များလာရှိပါသည်။
မှာ-ဤစဂ်ျသာသည်ဟဇရတ်သ်အာဒမ်(အ.စ)အားအရိုအသေ၊အလေးအ စားပြုခြင်းဖြစ်ပြီး၊ခဝပ်ကိုးကွယ်သည်စဂ်ျသာမဟုတ်ချေ။ကောင်းကင်တမန်တော်များ၏စဂ်ျသာမည်သည်စဂ်ျသာဖြစ်ကြောင်းအောက်ဖေါ်ပြဖွာရစီက ဗျာဖြင့်လေ့လာနိုင်ပေသည်။
زيبنده ستايش آن آفريدگارى است
كارد چنين دل آويز نقشى ز ماء و طينى
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏အခြားနေရာ၌ဟဇရတ်သ်ယူစွတ်(ဖ) (အ.စ)၏အကိုများကဟဇရတ်သ်ယူစွတ်(ဖ)(အ.စ)အားစဂ်ျသာပြုခဲ့ ကြောင်းလာရှိပေသည်။၎င်းတို့အားလုံးသည်တစ်ကြိမ်တည်းသာ ဟဇရတ်သ်ယူစွတ်(ဖ)(အ.စ) سُجَّداً وَخَرُّوا لَهُ အားစဂ်ျသာပြုခဲ့ကြောင်းလာ ရှိပေသည်။ စူရာယေယူစွတ်(ဖ)အာယတ်တော်၁၀၀
عدم جواز السجود لغير الله
ဤအခန်း၌တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)နှင့်အေမာမ်မာစူး(မ)(အ.စ)တို့မှမိန့်ကြားတော်မူသောဟဒီးစ်(၇)ပုဒ်အားတင်ပြထားပါသည်။ဟဒီးစ်ဆိုလို ချက်မှာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သာလျှင်စဂ်ျသာပြုခံဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်အ ခြားသူများ၊ အရာဝတ္တုများအတွက်ပြုခွင့်မရှိဟုလာရှိပေသည်။
ရှီအာ(၁၂ပါးအေမာမ်)များသည်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)နှင့်အေ မာမ်မာစူး(မ)(အ.စ)တို့၏စစ်မှန်သောသာဝကတော်များရဲ့ရီဝါယတ်တော် များကိုအခြေပြုထားသောကြောင့်ယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ“အကီသာ”၌ရပ်
တည်နေပါသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍မက်စ်ဂျစ်ဒွလ်ဟရမ်ကအ်ဗာဝတ်ကျောင်းတော်နှင့်မက်စ်ဂျစ်ဒွလ်နဘီ(ဆွ)၌နမာဇ်ဝတ်ပြုကြရာ၌ကော်ဇော်၏အပေါ်စဂ်ျသာမပြုဘဲ၊ခင်းထားသောကျောက်ပြင်အပေါ်တစ်ခါတစ်လေမိမိတို့နှင့်အတူယူဆောင်လာသောဖျာပေါ်စဂ်ျသာပြုကြပေသည်။ အီရန်၊အီရတ်၊ရှီအာ(၁၂ပါးများ)နေထိုင်သောနိုင်ငံအသီးသီးရှိဗလီ များ၌စဂ်ျသာပြုလုပ်ရန်စဂ်ျသာခဲ၊“မဟော်တုံး”များထားရှိပြီး၎င်းအပေါ်၌စဂ်ျ
သာပြုကြပေသည်။မနုဿလူသား၏အမြင်ြ့မတ်ဆုံးခန္တာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောနဖူးအားမြေခဲပေါ်သို့တင်ပြီးအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်အားဦးချ၊ ဦးညွတ်၍ စဂ်ျသာပြုခြင်းသည်မိမိကိုယ်အလွန်ကျိုးနွံ၊နှိမ့်ချထားကြောင်းပြဆိုနေပေသည်။
ဤမြေပေါ်၌စဂ်ျသာပြုခြင်းဖြင့်ရှဟီးဒ်များအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏လမ်းစဉ်၌အသက်ပေးခဲ့ပုံကိုသတိရရန်ဖြစ်ပြီးနမာဇ်၌အလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်အား စိတ်ပါဝင်စားမှုအများဆုံးဖြစ်ပေါ်လာစေရန်ဖြစ်ပေသည်။
ကဲရ်ဗလာကမြေခဲကိုအခြားရှဟီးဒ်မြေ၏မြေခဲများထက်ပို၍အလေးပေးပါသည်။သို့သော်လည်းပဲကဲရ်ဗလာ၏မြေခဲနှင့်အခြားမြေခဲများအပေါ်၌သာအမြဲစဂ်ျသာပြုရမည်ဟုအစွဲမထားပေ။မက်စ်ဂျစ်၌ခင်းထားသော ကျောက်ပေါ်၌လည်း စဂ်ျသာပြုနိုင်ပေသည်။ဥပမာ-ကအ်ဗာဝတ်ကျောင်းတော်နှင့် မက်စ်ဂျစ်ဒွလ်နဘီ(ဆွ)အတွင်းခင်းထားသောကျောက်ပြားများပေါ်တွင်အလွယ်တကူစဂ်ျသာပြုနိုင်ပေသည်။(ဂရုပြုပေးပါ။)
မည်သို့ဆိုစေရှီအာများထံ၌မြေခဲ၊မြေတုန်းများပေါ်စဂ်ျသာပြုနိုင်ကြောင်း ပြဆိုထားသောတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ဟဒီးစ်တော်၊သာဝက တော်ကြီး များ၏လက်တွေ့ကျင့်သုံးခဲ့သောဘဝသမိုင်းများသက်သေအမြောက်အများပြဆိုနိုင်ပါသည်။ဤအကြောင်းကိုရှေ့လျှောက်တင်ပြပါမည်။အေမာမ်များထံမှရီဝါယတ်တော်များကိုအမြန်ဆုံးတင်ပြပါမည်။
ဂျအ်ဗေအဗဒွလ္လာဟ်အန်ဆာရီရုပ်ထု၊ဆင်းထုကိုးကွယ်သူဖြစ်သွား ပြီလော?ဗလီ၏ဖျာပေါ်၌စဂ်ျသာပြုလုပ်သူ၊သို့မဟုတ်ကအ်ဗာနှင့်မက်စ်ဂျစ် ဒွန်နဘီ(ဆွ)၌ခင်းထားသောကျောက်ပြင်ပေါ်၌်စဂ်ျသာပြုလုပ်သူအားဖျာကိုးကွယ်သူ၊ကျောက်ကိုးကွယ်သူဟုပြောနိုင်ပါသလား?
ရှီအာများအနေဖြင့်အဘယ်ကြောင့်မြေကြီးပေါ်စဂ်ျသာပြုနိုင် ကြောင်း အေမာမ်ဂျာဖွရ်ဆွာဒစ်(အ.စ)၏ဟဒီးစ်ကိုအလေးပြုခြင်းဖြစ်လုံ လောက်ပေသည်။
အေမာမ်ဂျာဖွရ်ဆွာဒစ်(အ.စ)၏သာဝကတော်တစ်ပါးဖြစ်သောပ ညာရှင် ဂျနာဘေဟရှမ်းဗင်ဟိုကမ်ကမည်သည့်အရာများအပေါ်စဂ်ျသာပြု နိုင်ပြီး၊ မည်သည့်အရာများအပေါ်စဂ်ျသာမပြုနိုင်ကြောင်းအေမာမ်ဂျာဖွရ်ဆွာဒစ်(အ.စ)ထံမေးမြန်းခဲ့ရာအေမာမ်(အ.စ)အနေဖြင့်ဤကဲ့သို့အဖြေပေးလေ၏။
مَا أُكِلَ أوْ لُبِسَ السُّجُودُ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ عَلَى الاأُرْضِ أَوْ مَا أنْبَتَتْ الأرْضُ إِلاَّ “မြေကြီးအပေါ်မှအပအခြားအရာများအပေါ်စဂ်ျသာပြုပိုင်ခွင့်မရှိပေ။သို့သော်စားစရာ၊ ဝတ်စရာ၊ မဆုတ်သောမြေကြီးမှထွက်သောအရာများအ ပေါ်၌လည်းစဂ်ျသာပြုနိုင်ပေသည်။”
أنْ يَكُونَعَلَى مَا يُؤْكَلُ وَ يُلْبَسُ لاِأُنَّ السُّجُودَ هُوَ الْخُضُوعُ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلاَ يَنْبَغِى
فَلاَ يَنْبَغِى مَا يَأْكُلُونَ وَ يَلْبَسُونَ وَ السَّاجِدُ فِى سُجُودِهِ فِى عِبَادَةِ اللهِ لاِأُنَّ أبْنَاءَ الدُّنْيَا عَبِيدُ
الدُّنْيَا الَّذِينَ اغْتَرُّوا بِغُرُورِهَا أنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ فِى سُجُودِهِ عَلَى مَعْبُودِ أبْنَاءِ
“အကြောင်းသည်ကားစဂ်ျသာသည်ကျိုးနွံ၊နှိမ်ချမှု၏လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပေသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍စားသောက်စရာများ၊ဝတ်ဆင်စရာများအပေါ်စဂ်ျသာပြုခြင်းသည်မသင့်လျော်ချေ။အကြောင်းသည်ကားလောကီလိုက်စားသူများသည်အစားအသောက်များ၊အဝတ်အထည်များမက်မောနှစ်မြို့သောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။စဂ်ျသာပြုခြင်းသည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်အားအေ ဗာဒသ်ပြုခြင်းဖြစ်ပေ သည်။သို့ဖြစ်ပါ၍နဖူးအားလောကီလိုက်စားသူများ၊ တပ်မက်သော၊ ဂုဏ်ယူသောအရာများအပေါ်တင်ရန်စဂ်ျသာမပြုသင့်ချေ။” ဆက်လက်မိန့်တော်မူသည်မှာ-
لِلتَّوَاضُعِ وَالْخُضُوعِ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَالسُّجُودُ عَلَى الاأُرْضِ أَفْضَلُ لاِأُنَّهُ أبْلَغُ
جُعِلَتْ لِىَ الاْأُرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً
အကြောင်းသည်ကား-တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်မြေကြီး အား(သိုဟူး)သန့်စင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသောအရာ၊မက်စ်ဂျစ်(ဗလီ)ဟူ၍သုံးထားပေသည်။ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်(သိုဟူး)နှင့်သာ(သရ်ယမွမ်)ပြုနိုင်ပြီးမြေ ကြီးနှင့် ကျောက်ခဲပါကြောင်းသိထားကြပေသည်။
ဟုတ် ကျောက်ဖြစ်ရပေမည်။အကယ်၍တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် အလ်လေစွန္နတ်အချို့ဖေကာရှင်များထင်သလိုသုံးထားလျှင်
طهوراً; سرتاسر زمين براى من مسجد است جعلت لى الارض مسجداً وترابها
و خاك آن وسيله طهارت و تيمم
သို့ဖြစ်ပါ၍ဤဟဒီးစ်တော်၌မက်စ်ဂျစ်(ဗလီ)၏ဆိုလိုသည့်အဓိပ္ပါယ်မှာ- စဂ်ျသာဂါဖြစ်ကြောင်း၊စဂ်ျသာဂါလည်းပဲ(သရ်ယမွမ်)လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ရ မည်ဆိုသော အချက်အားသံသယမရှိပြောဆိုနိုင်ပါသည်။
ဤအတွက်ကြောင့်ရှီအာများအနေဖြင့်မြေကြီးပေါ်၌သာစဂ်ျသာပြု ကြပြီး၊ ကော်ဇော်နှင့်ထိုကဲ့သို့သော်အရာများအပေါ်၌စဂ်ျသာမပိုင်ဟုပြော ဆိုခြင်းသည် မမှားယွင်းသည့်အပြင်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ဟဒီးစ်တော်အပေါ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်ပေသည်။
لانظر إلى أثر ذلك فى جبهته و ارنبته سجد رسول الله فى يوم مطير حتّى أنّى
زمين سجده مى كرد و اثر آن بر پيشانى و رسول خدا را در يك روز بارانى ديدم كه بر
بينى او نمايان بود
“ကျွန်တော်(အဗူဟိုရိုင်းရ်)အနေဖြင့် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အား မိုးရွာသော တစ်နေ့၌ စဂ်ျသာပြုနေသည်ကို၎င်း၊ ပြီးနောက် ကိုယ်တော်၏နဖူးတော်နှင့် နှာခေါင်းတော်ပေါ်၌စဂ်ျသာပြုထားသောအရိပ်လက္ခဏာများကို၎င်းတွေ့ခဲ့ရပေသည်။”
(صلى الله عليه وآله) اكرم ما رأيت رسول الله متقياً وجهه بشىء; من هرگز نديدم پيامبر
به هنگام سجده) پيشانى خود را به چيزى بپوشاند)
“ကျွန်မအနေဖြင့် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အားမြေကြီးပေါ်မှအပ အခြားအရာများအပေါ်စဂ်ျသာပြုခဲ့သည်ကိုလုံးဝမတွေ့ခဲ့ရပေ။”
الخُمرة فيسجد; پيامبر بر قطعه حصيرى نماز مى خواند و رسول الله يصلى على
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်ဖျာပေါ်၌နမာဇ်ဖတ်ရှုတော်မူပြီး၊ဖျာ ပေါ်၌သာ စဂ်ျသာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရပေသည်။
ကျော်ကြားသောအဟ်လေစန္နတ်၏ကျမ်းကိုး၊ကျမ်းကားများ၌လည်း မြောက်မြားစွာသောရီဝါယတ်တော်များထဲမှတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်နမာဇ်ဖတ်ရန်အတွက်“ခိုမရေ”ခေါ် စွန်ပလွန်ပင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထား သောဖျာငယ် အပေါ်၌နမာဇ်ဖတ်တော်မူခဲ့ကြောင်း၊၎င်းဖျာပေါ်၌သာစဂ်ျသာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပါရှိပေသည်။
သို့သော်ရှီအာများ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ကဲ့သို့ပြုလုပ်၍နမာဇ် ဝတ်ပြုသည့်အခါဖျာပေါ်စဂ်ျသာပြုချိန်တွင်အချို့တယူသန်၊အစွန်းရောက်ရှီအာမုန်းတီးသူများသည်“ဗေဒ်အတ်”ဟူ၍မတရားစွပ်စွဲသမုတ်ပြီး၊အမျက်ဒေါသမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်ကြ၏။အမှန်တကယ်တော့ဤဟဒီးစ်တော်အရတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏စန္နတ်တော်ဖြစ်ကြောင်းသိရပေသည်။ အံ့ဩစရာပါလား!2 စန္နတ်တော်များကိုဗေဒ်အတ်ဟုဆိုလိုခြင်းသည်မည်မျှအန္တရာယ်ကြီးမားလှပါသနည်း?
မက်စ်ဂျစ်ဒွလ်နဘီ(ဆွ)၌ ကျွန်တော်(အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာမကာ ရှာရဇီး) သည်ဖျာငယ်လေးအပေါ် နမာဇ်ဖတ်နေစဉ် အစွန်းရောက်တစ်ယူသန် ဝါဟာဘီပညာရှင်တစ်ယောက်လာပြီး၊ဖျာငယ်လေးကိုလုယူပြီး၊စိတ် ဆိုးမာန်တက် ပြီးပစ်ပေါက်ကာ“ဗေဒ်အတ်”ဟုပြောခဲ့သောဖြစ်ရပ်ကိုမမေ့ သေးပေ။
ကျွန်ုပ်တိ်ု့အနေဖြင့်သာဝကတော်များနှင့်သာဗေအီးများ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိအား လေ့လာ သုံးသပ်ကြည့်သောအခါစိတ်ဝင်စားစရာအချက်သည်ကား၎င်းတို့အနေဖြင့်လည်းမြေကြီးပေါ်စဂ်ျသာပြုခဲ့သည်ဆိုသောအချက်ပင်ဖြစ်ပေသည်။
فآخذ قبضة من الحصى فاجعلها فى كنت اصلّى مع النبى(صلى الله عليه وآله)الظهر لجبينى حتّى اسجد عليها كفىّ ثم احولها إلى الكف الأخرى حتّى تبرد ثمّ اضعها
من شدّة الحرّ
“ကျွန်တော်အနေဖြင့် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)နှင့်အတူနမာဇ်ဇေ ဇဟိုရ်ဖတ်ခဲ့၏။ကျွန်တော်သည်အရမ်းပူနေသောကျောက်စရစ်ခဲလေးများကိုလက်တစ်ဘက်သို့အေးရန်အလို့ငှာပြောင်းပြီး၎င်းအပေါ်စဂ်ျသာပြုခဲ့ပါ သည်။
အထက်ပါဟဒီးစ်တော်ကိုသုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်တော်၏သာဝက တော်များသည်မြေကြီးပေါ်၌စဂ်ျသာပြုခဲ့ကြောင်းကောင်းမွန်စွာသိရပေ သည်။ရုတ်စွအဆုံးပူပြင်းနေချိန်၌ပင်ပြုခဲ့ကြ၏။အကယ်၍မြေကြီးပေါ်၌စဂ်ျသာပြုရန်မလိုလျှင်ဤမျှအပင်ပန်းခံကြမည်မဟုတ်ချေ။(ချွင်းချက်ကောဇော၊အဝတ်တို့အပေါ်၌စဂ်ျသာမပြုခဲ့ကြပေ။)
فيأخذ أحدنا الحصباء فى يده فإذا برد كنّا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) فى شدّة الحرّ
وضعه و سجد عليه
ကျွန်တော်အနေဖြင့်နေကြဲကြဲပူလောင်နေချိန်၌တမန်တော်မြတ် ကြီး(ဆွ)နှင့် အတူရှိနေကြ၏။ကျွန်တော်တို့အထဲမှအချို့သည်ကျောက်စရစ်ခဲလေးများကောက်ပြီးအေးအောင်လုပ်ကာမြေကြီးပေါ်ထား၍စဂ်ျသာလုပ် လေ၏။
ဤဟဒီးစ်၏ဆိုလိုချက်ဖြင့်ဤလုပ်ရပ်သည်သာဝကတော်များအ ကြား ဓလေ့ရှိခဲ့ကြောင်းကိုဆိုလိုနေပေသည်။
أنّ ابن مسعود لا يسجد ـ أو قال لا يصلّى ـ إلاّ على الأرض
(၄) အဗ်ဒွလ္လာဟ်အဗ်နေမစအူးဒ်၏မိတ်ဆွေများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သူမစ် ရူး(က)ဗင်အဂ်ျသာဆင့်ပြန်သည်မှာ-
على غير الأرض حتّى فى السفينة و كان لا يرخص فى السجود
كان يحمل فى السفينة شيئاً يسجد عليه
“သူ(အဗ်ဒွလ္လာဟ်အဗ်နေမစအူးဒ်)သည်မည်သူကိုမျှမြေကြီးပေါ်မှလွဲ၍စဂ်ျသာပြုခွင့်မပေးချေ။နောက်ဆုံးရေလမ်း၊ခရီးသွားရချိန်၌ပင်မိမိနှင့်အတူစဂ်ျသာပြုရန် အရာ(မြေခဲ(သို့)ကျောက်စရစ်ခဲ)အားသဘောင်္ပေါ်ယူဆောင်သွား ပြီး ၎င်းအပေါ်စဂ်ျသာပြုလေ၏။
اسجد ابعث إلىّ بلوح من أحجار المروة عليه
عبدالعزيز لا يكتفى بالخمرة بل يضع عليها التراب و يسجد عليه كان عمر بن
အထက်ဖေါ်ပြပါဟဒီးစ်ရီဝါယတ်တော်များအားလုံးကိုဖတ်ရှုလေ့ လာခြင်းဖြင့်အသင်မည်ကဲ့သို့ဆိုလိုချက်များကိုသဘောပေါက်နားလည်ပါသနည်း? ပြုခဲ့ဟိုဆိုလိုနိုင်ပါသလော?ငြင်းနိုင်ပါသလော?